छक्का पञ्जा–२ को दोस्रो गीत पनि विवादमा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
छक्का पञ्जा–२ को दोस्रो गीत पनि विवादमा !
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०७४, मंगलवार August 29, 2017
भदौ १३, काठमाडौं । छक्का पञ्जा २को ‘नाइलनको साडीमा’ गीतलार्इ चोरीको अारोप लागीरहेको बेला सोमबारमात्रै सार्वजनिक छक्का पञ्जा २ को अर्को गीत ‘तिमी उता किनारमा झ्याम्म झ्याम्म’ पनि विवादमा तानिएको छ । उक्त गीतलार्इ पुरानो फिल्म देवर बाबुको गीत ‘बास्ना मिठो कस्तुरीको’ गीतको संगीत चोरी गरेको अारोप लागेको छ ।
छक्का पञ्जा २ को नयाँ गीतमा हरिवंश आचार्य र आस्था राउतले आवाज दिएका छन् भने किरण कँडेलको संगीत रहेको छ । संगीतकार अलमोडा राना उप्रेतिको संगीत रहेको पहिलो गीतमा नै यो फिल्म विवादमा तानिएको थियो । यो गीतको म्युजिक एरेन्जमा पनि अलमोडाको संलग्नता रहेको छ ।
दुई दिनमा दुई लाख भ्युअर्स कमाएको भएपनि यसको संगीत चोरी भएको चर्चा बजारमा चलिरहेको छ । फिल्म निर्माता दिपकराज गिरीले गीतमा नेपाली देउडा भाका रहेको जनाएका पनि संगीत चोरी भएको भन्ने सन्दर्भमा भने उनी निसब्द देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि फिल्मीनगरीमा समेत यस गीतले ठुलो चर्चा पार्इरहेको छ ।
छक्का पञ्जा २ को अर्को गीत ‘तिमी उता किनारमा झ्याम्म झ्याम्म’
देवर बावुको पुरानो गीत “बास्ना मीठो कस्तुरीको “